Indlela yokupela iMader ulwazi
Indlela yokubhala iMader
Imvelaphi yegama lokuqala Mader
Omnye wemicimbi ekufuneka siwuqwalasele kwimigaqo yopelo kukuba ihlaziyiwe. Igama linokuhlaziywa njani? Ewe, ezinye izithethantonye zingenza iintsingiselo kunye neentsingiselo ezahlukeneyo ngokuhamba kwexesha, ke kufuneka sifunde upelo oluchanekileyo lwamagama amatsha ngokuwamamela. Kukho amagama amadala kunye namagama amatsha angena kulwimi lwethu.
Ukucaca, abantu abaninzi abayi kuyithobela imithetho yokupela ukuba akukho zimpazamo zopelo kwinkqubo yethu yovavanyo. Ngokwenyani, kukho inqaku elibalekayo lokuhoywa. Ukuqaqanjelwa okuza kwenzeka ngamazwi olwimi lwethu kunokushukumisa kakhulu. Ngokweliso, kuthintela ulwimi lwethu ukuba lungonakalisi; Kufuneka simkhuthaze ukuba asebenzise impuma kwaye asebenzise wonke umntu ngokufanelekileyo. Amagama zombini aneengcambu ezinzulu, ezembali kunye neendlela ezintle zonxibelelwano Ukuyikhusela kuthetha ukukhusela inkcubeko yethu, ukukhusela inkcubeko ukukhusela ikamva.
Amanye amagama amagama asimamva. Nabani na owaziyo amagama; Isikhamiso-ukuhla kwesandi-ukufana kwesandi (ukuqina) ngenxa yoonobumba p, ç, t, k kunye nabo bonke abathandi bolwimi abanesakhono kwisimamva semveliso banolwazelelo kwiimpazamo zopelo. Ukuchaneka nokusetyenziswa rhoqo kwamagama; Ngapha koko, kuyimfuneko kuzo zonke iilwimi zehlabathi ukukhuthaza le meko. Ukuphakama kwamagama kuyinyani engenakuphikwa, kodwa ukuba la magama abhalwe kakuhle ngokufanelekileyo kwaye ngokuhambelana nesikhokelo sopelo kubaluleke kakhulu.
Kuthetha ntoni iMader?
Ungayibhala njani iMader?
Isikhokelo seMader Spelling
Igxalaba, -mzu, -uzu
Izithuba zokuhamba ngomkhumbi
I-Ovacik, i -k'i